Ny P&O Cruises Australia dia nanitatra fiatoana taorian'ny fiainganan'i Sydney sy Brisbane
Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Ny P&O Cruises Australia dia nanitatra fiatoana taorian'ny fiainganan'i Sydney sy Brisbane
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Nanazava mazava tsara ny governemanta fa ny tokonam-baravarana dia lakilen'ny famaranana ny fanidiana, ny fameperana ny sisintany ary, amin'ny farany, ny fanokafana indray an'i Aostralia. Ary ampahany amin'ny fiverenana amin'ny fiarahamonina mahazatra ny fiantohana fa ny Aostraliana mihoatra ny iray tapitrisa izay misafidy fialantsasatra fitsangantsanganana isan-taona dia manana fotoana hanaovana izany indray.
Ny fiatoana an-tsitrapo dia hihatra amin'ireo fitsangatsanganana an-tsambo izay kasaina hivoaka any Brisbane sy Sydney.
P&O Cruises Australia dia nanamafy ihany koa fa manafoana ny vanim-potoanan'ny fahavaratra ao Melbourne, izay tsy azo atao intsony.
Ny P&O Cruises dia miandrandra ny andro ahafahany mandray ireo mpitsidika fitsangantsanganana an-tsambo.
Ny P&O Cruises Australia dia nanitatra ny fiatoana am-perinasa ho an'ireo fitsangantsanganana an-tsambo niainga avy tany Sydney sy Brisbane tamin'ny volana iray hafa hatramin'ny tapaky ny volana janoary taona ho avy izao mba hanomezana fahatokisan-tena bebe kokoa amin'ny vahiny ny drafitra ny fetin'ny Krismasy sy taom-baovao noho ny tsy fahazoana antoka momba ny fiverenan'ny sambo fitsangantsanganana.
Ny fiatoana an-tsitrapo dia mihatra amin'ireo fitsangatsanganana an-tsambo izay kasaina hiainga ny 18 Desambra 2021 hatramin'ny 14 Janoary 2022 (ho an'i Brisbane) ary ny 18 Janoary 2022 (ho an'ny Sydney).
Fitsangatsanganana P&O Nanamafy ihany koa i Aostralia fa manafoana ny vanim-potoanan'ny fahavaratr'i Melbourne, izay tsy azo atao intsony noho ny fanitarana farany.
"Fantatray fa mahakivy ireo vahininay izay nanantena ny hiaraka amin'ny namana sy ny fianakaviana mandritra ny Krismasy sy ny Taom-baovao, kanefa, tianay ny hanao an'ity fanambarana ity faran'izay haingana mba hahazoana antoka fa afaka mikasa ny hanana antoka izy ireo mandritra ny fialantsasatra," Fitsangatsanganana P&O Nilaza ny filoha Aostralia Sture Myrmell.
“Te-hisaotra indray ny vahininay izahay noho ny fahatokiany sy ny fanohanany. Manantena ny andro ahafahanay mandray vahiny miverina an-tsambo hankalaza ireo hetsika manokana ireo amin'ny kalandrie fialantsasatra. ”
Fitsangatsanganana P&O Vao tsy ela akory izay i Aostralia dia nanambara ny fikasany hanohy ny asany any an-toerana miaraka amin'ny fitsangantsanganana ho an'ny vahiny sy ny ekipa vita vaksiny feno.
“Nanazava tsara ny governemanta fa ny tokonam-baravarana dia lakilen'ny famaranana ny fanidiana, ny fameperana ny sisin-tany ary, amin'ny farany, ny fanokafana indray an'i Aostralia. Ary ampahany amin'ny fiverenana amin'ny fiarahamonina mahazatra ny fiantohana fa ireo Aostraliana mihoatra ny iray tapitrisa izay misafidy fialantsasatra fitsangantsanganana isan-taona dia manana fotoana hanaovana izany indray, "hoy Andriamatoa Myrmell.
"Mampalahelo fa mbola tsy mazava amintsika ny fepetra takian'ny governemanta sy ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fiverenan'ny fitsangantsanganana an-trano an-tokatrano fa manantena izahay fa hiresaka haingana izany resaka izany ankehitriny ary misy ny fiasa lehibe eo amin'ny fisokafan'ny fiaraha-monina."
Ireo vahiny izay voakasiky ny famandrihana dia hampandrenesina ny fiatoana sy ny safidy azo atao mivantana na amin'ny alàlan'ny masoivohon'ny dia notendreny.